Kuphazamiseke izinhlelo zeDowns zomdlalo neThwihli Thwahla - Impempe
IMamelodi Sundowns seyiqinisekise ukuthi kuhlasele umkhuhlane onzima ekhempini yayo kulandela ukumiswa komdlalo weDStv Premiership, eChatsworth Stadium, ngoMgqibelo, ngenxa yemvula.
Ngokusho kwesitatimende esikhishwe yiSundowns umkhuhlane uhlasele abadlali abaningi impela eqenjini.
Ngenxa yalokhu nezimpawu ezibonakalayo ezithinta inkinga yokuphefumula kahle cisho eqenjini lonke, iqembu seliqinisekise ukuthi lenza konke okusemandleni ukuvikela abadlali nabanye abahlangana nabo enkundleni nangaphandle kwayo.
Udokotela weqembu uCarl Tabane, uthe: “Abadlali bahlolelwa umkhuhlane okumbakanya imfuluyenza, iCovid-19 neRSV PCR, ukuthola kahle imbangela yalezi zimpawu zomkhuhlane.
“Kula masonto edlule izwe libe nenkinga yakho kokuthathu lokhu, ngakho kubalulekile ukuthi sihlole abadlali njengoba bekhombisa izimpawu ezifanayo. Siyaqhubeka nokulandela imigudu efanele.”
Iqembu liveze ukuthi lizimisele ngokubophela isikimu esiqinile njengoba lisonga imidlalo yeDStv Premiership ka-2021/2021. Lizobhekana neRoyal AM khona eChatsworth Stadium, ngoMsombuluko ngo-3 ntambama.
Ngemuva kwalo mdlalo iSundowns izobe seyinikwa ngokusemthethweni indebe yePremiership njengoba ingompetha beligi okwesihlanu kulandelana.
Previous Previous post: Akanikwe ithuba uKhune kwiChiefs, kusho uKhuzwayo
Next Next post: UMsimango uchaza ngomuzwa omfikele eshaya igoli elihlenge iTS Galaxy